Jubaland oo ku adkeysatay qabashada shirka dowladgoboleedyada – XAMAR POST
Jubaland oo ku adkeysatay qabashada shirka dowladgoboleedyada
Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG u ah Maamulka Jubaland waxaa ka soconaya qaban qaabada Shirka ay isugu imanayaan madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada ka jira Soomaaliya.
Madaxweynaha Maamulka Jubalabnd Axmed Maxamed Islaam,ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay qabashada shirkan,hayeeshee dowladda Federaalka ah ayaa Jubaland cadaadis ku saareysay in ay baajiso shirkan islamarkaana shir ay dowladda dhexe qaban qaabiso ka dhco Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in wax dib u dhac ah uusan ku imaneyn shirka Kismaayo ee ay Jubaland ku dhawaaqday,waxaana uu intaas ku daray in Ergada Shirka ka qeybgeleysa ay 3-5da Bishan isugu tagayaan Kismaayo.
Maxamuud Sayid Aadan waxaa uu sheegay in Jubaland aysan qorshe kale ka lahayn shirkan oo aan ka ahayn isfaham dhexmara dowladda Federaalka ah iyo dowlad Goboleedyada.
Dowladda Federaalka ah ayaa shaki ka muujisay shirka mideynaya madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada,taas oo haddii ay dhacdo u arkeyso in ay qeyb ahaan lumin karto maamulka arrimaha gudaha Soomaaliya.
Mas’uuliyiin ka tirsan Jubaland ayaa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in dowladda Federaalka ah waddo qorshe ay ku dooneyso joojinta shirka Kismaayo ee uu Axmed Madoobe ku baaqay.
DEG DEG: Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo La Magacaabay